ओली र प्रचण्डबिचको फुट देखिएसँगै चिनियाँ टोली आएसँगै दक्षिण भारतको टोली पनि दौडँदै आयो, आखिर के चाहन्छ भारत ? – Gazabkonews
ओली र प्रचण्डबिचको फुट देखिएसँगै चिनियाँ टोली आएसँगै दक्षिण भारतको टोली पनि दौडँदै आयो, आखिर के चाहन्छ भारत ?
त्यहाँको बिदेश मन्त्रालयमा ‘रअ’ ले आफ्नो सम्पर्क अधिकारी खटाउने प्रचलन छ । उनी पनि त्यस्तै भूमिकाका मानिन्छन् । ०५४ को एमाले विभाजनताका काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत मनोज भारती (विशेष अतिरिक्त सचिव) मातहत इस्ट्याब्लिस्मेन्ट र गेम डिभिजन प्रमुख) अर्कातिर नेकपा नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकता जोगाउने पहलअन्तर्गत अस्ति बहान र दिउँसो गरी दुईपटक बिष्णु पौडेल र एकचोटि हरि पराजुली अनि भाष्कर काफ्लेलाई घरमै भेट्नुभएको छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।